‘राज्यले नगरेको काम मिल्सबेरीले गरेको छ, म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु’ : ऋषि धमला « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, २ असोज । रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवम् प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अग्रपँक्तिमा रहेर काम गरेकाहरुलाई मिल्सबेरी स्कुलले गरेको अभिनन्दनको स्वागत गरेका छन् । उनले राज्यले गर्नुपर्ने काम मिल्सबेरीले गरेको भन्दै सम्मान व्यक्त गरे ।
आज राजधानीमा आयोजित ‘मिल्सबेरी महोत्सव–२०७८’ लाई सम्बोधन गर्दै धमलाले यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्यालयका अध्यक्ष सुशिल दाहालको नाम लिएर राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे । उनले भने,‘फ्रन्टलाईनमा काम गर्नेलाई सलाम छ । सञ्चारकर्मीहरु पनि कोरोना महामारीमा पीडामा थिए । संक्रमण मलाई पनि भयो । मैले कुनैपनि दिन कार्यक्रम रोकिनँ । जनता जान्न चाहन्छन् र नेपाली बहस कार्यक्रम प्रत्येक दिन होम–आईसोलेशनमा बस्दा लाईभ गरें । धेरैले मलाई तपाईँलाई कोभिड नै भएको हो त ? पनि भनेर सोध्नुभयो, मैले हो भनें । तर, आत्मविश्वासका साथ मैले काम गरें । कोभिडविरुद्ध खटिने योद्धाहरुलाई मिल्सबेरीले सम्मान गरेको छ। राज्यले गर्ने काम तपाईँहरुले गर्नुभयो । म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
धमलाले राम्रो काम गर्नेहरुलाई सबैले साथ दिने र पछ्याईरहने भन्दै मिल्सबेरीले गरेको कामबाट अरुले प्रेरण लिने विश्वास दिलाए । उनले आफू आवद्ध मिडियामार्फत मिल्सबेरीलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको सुनाए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगनकुमार थापाले कोभिड महामारी नियन्त्रणमा चनाखो भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसअघि के कति काम गर्न सकियो ? त्यो भविष्यमा समिक्षाको विषय होला भन्दै आगामी दिनमा पनि सरकार चनाखो भएर बस्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘कोभिडको बारेमा हामीले मुलुकलाई जोखिमबाट बचायौं । के गर्यौं, के गरेनौं त्यो भोलि समिक्षा होला, तर अझै हामीले होशियारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ उनले मिल्सबेरीले ‘मिल्सबेरी महोत्सवको अवसरमा कोभिडविरुद्ध फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गरेकाहरुलाई गरेको अभिनन्दनको खुलेर प्रशंसा गरे । उनले भने,‘यो खुशीको कुरा हो, फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्नेहरुलाई अभिनन्दन गर्दा उहाँहरुको सम्मान भएको छ ।’